Ny Noely na Krismasy dia andro firavoravoana kristiana izay ankalazana sy ahatsiarovana ny nahaterahan' i Jesoa Kristy. Aorian’ ny Paska (na Paka) dia ny Noely no andro fety manan-danja indrindra amin' ny alimanakan' ny ankamaroan' ny fiangonana kristiana. Ny andron' ny Noely anefa dia tsy fitsingerenan' ny andro nahaterahan’ i Jesoa fa daty nifanarahana fotsiny hanaovana ny fankalazana. Ny fiangonana katôlika sy ny fiangonana prôtestanta dia mankalaza ny Noely amin' ny 24 sy 25 Desambra. Tsy misy soratra ao amin' ny Baiboly izay mandidy ny fankalazana ny Noely. Noho izany dia ao ireo fiangonana mankalaza ary ao koa ireo tsy mankalaza izany. Ankehitriny dia maro ny olona mankalaza ny Noely na Krismasy tsy mampifandray izany amin' ny resaka fivavahana.
Tamin' ny taonjato faha-4 no nanombohana nankalaza ny Noely izay niely tsiklikely eran' i Eorôpa sy manerana ny tany lemaka manodidina ny Ranoasina Mediteranea. Izany fety fankalazana ny Fahaterahan' i Jesoa izany dia nihanisolo ireo fety manam-pifandaisana amin' ny andro manodidina ny 21 na 22 Desambra toy ny fety jermanika atao hoe Yule, ny fetin' i Mitra (jereo koa Mitraisma), ny Satornaly rômana, sns. Naseho ho toy ny masoandron' ny fahamarinana ao amin' ny andro vaovao i Jesoa Kristy, ka ny fahaterahany dia manokatra ny taona litorjika amin' ny fotoana anaovana ny lamesa misasaka alina.
Ny fitantarana ny nahaterahan' i Jesoa araka ny Evanjely no fiaingan' ny famoronana zavakanto nandritra ny taonjato maro (ao ny hosodoko, ny sokitra, ny mozika, ny asa soratra) izay nohamafisin' ny fielezan' ny fampiasana ny tranon' omby sy ny fandrian-jazakely, nefa ireo fombafomba sy zavatra manam-pifandraisana amin' ny fety tsy kristiana tany aloha dia tafiditra ao koa. Ny hazo kesika nampiasain' ny vahoaka jermanika sy ny vahoaka any amin' ny faritra avaratr' i Eorôpa, izay mariky ny zavaboary velona misedra ny ririnina dia nomena haja nanomboka tamin' ny taonjato faha-16 sady tafiditra tany am-piangonana. Ankehitriny ny hazo Noely dia lasa evan' ny fotoana ankalazana ny faran-taona, ka niaraka tamin' ny fialan' ny fivavahana kristiana avy ao Eorôpa amin' izao andro izao.
Ilay fanao ahitana an' i Dadabe Noely, izay niely eran' izao tontolo izao tamin' ny taonjato faha-20, dia nameno izany fivoarana izany izay nanampy singa ivelam-pivavahana amin' ity fety kristiana ity, izay mitodika kokoa any amin'ny ankizy sy ny fianakaviana ary ny fanomezana.
3 Tantaran’ ny Noely
4.1 Fiangonana katolika romana sy fiangonana protestanta
Ny teny hoe noely dia avy amin' ny teny frantsay hoe noël izay avy amin' ny teny latina hoe natalis izay midika hoe "momba ny fahaterahana". Io teny io dia iray fototra amin' ny teny maro ao amin'ny fiteny rômana (frantsay; noël, italiana: natale, ôksitana: nadal na nadau, katalana: nadal, pôrtogey: natal, sns). Ny mpamari-toetra latina hoe natalis izay midika hoe "momba ny fahaterahana" (avy amin' ny teny hoe natus "teraka", "ateraka"), izay nakambana tamin' ny teny latina hoe dies "andro" tao amin' ny fitenenana hoe natalis dies "andro nahaterahana". Na dia avy amin' ny teny frantsay ny teny hoe Noely dia tsy ny Katôlika malagasy ihany no mampiasa azy.
Ny Evanjelin' i Lioka dia mitantara fa nandeha avy tany Nazareta hankany Betlehema i Josefa sy i Maria mba hosoratana anarana tamin' ny fanisam-bahoaka natao tany, ary teraka tao i Jesoa sady nampandrina tanatin' ny fihinanam-bilona. Nisy anjely nanambara an' i Jesoa ho mpamonjy ny olona rehetra ary nisy koa mpiandry ondry tonga nitsaoka azy.
Tantaran’ ny Noely[hanova | hanova ny fango]
Talohan' ny naha kristiana ny Tandrefana dia nantsoina hoe Dies Natalis Solis Invicti ("Andro Nahaterahan' ny Masoandro Tsy Resy") ny datin’ ny 25 Desambra. Isan’ ireo andriamanitry ny Rômana i Sol Invictus ("Masoandro Tsy Resy") tamin' izany. Tamin' ny nanjakan' ny emperora rômana Aoreliano (frantsay: Aurélien) (taona 270–275) dia nataony ho andro firavoravoana lehibe hankalazana ny nahaterahan' io andriamanitra masoandro io ny 25 Desambra. Mifanandrify amin' ny andro nahaterahan' ny andriamanitra rômana taloha Mitra (izay azony avy any Persia) io daty io, dia nankalazana miaraka ny fetin' ireo andriamanitra roa ireo. Fetin' ny fandresen' ny mazava ny aizina izany.
Rehefa lasa kristiana ny kolontsaina tany Andrefana dia nisy didim-panjakana nivoaka tany Tesalonika nandrara ireo fanompoam-pivavahan' ny mpanompo sampy ka ny Kristiana irery ihany no nankalaza sy lasa tompon' io fety io. Tsy milaza na ny taona na ny andro nahaterahan' i Jesoa Kristy ireo Filazantsara (na Vaovao Mahafaly) efatra. I Origenesy (frantsay: Origène) dia isan' ireo tsy nanaiky ny fankalazana ny Noely. Tsy nankalazaina ho fety kristiana izany raha tsy afaka taonjato telo taty aorian’ ny nahaterahan’ i Jesoa Kristy. I Hipolito avy any Roma (frantsay: Hyppolyte de Rome) no nilaza fa teraka 25 Desambra i Jesoa raha nanao ny hevitenin’ ny Bokin' i Daniela izy tamin' ny taona 204.
Tamin' ny taonjato faha-17 ireo firenena nandray ny fivavahana vokatry ny reformasiona (na reforma, fanavaozam-piangonana) dia tsy nankasitraka ny fankalazana ny Noely izay heveriny ho mitovy endrika loatra amin' ny fetin' ny mpanompo sampy na ny fety katolika. Noleferiny ihany izany taty aoriana ka lasa fanao. Amin' izao fotoana izao dia mankalaza Noely ny ankamaroan'ny Kristiana. Toraka izany koa na ny tsy Kristiana izay manao azy ho fetim-pianakaviana fotsiny ka lasa betsaka ireo fombafomba tsy misy ifandraisany amin' ny fivavahana kristiana izay ankalazany ny Noely.
Fiangonana katolika romana sy fiangonana protestanta[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny andron' ny Papa Liberio (frantsay: Libère) (taona 352 – 356) dia noraiketina ho amin' ny 24 Desambra hariva sy 25 Desambra tontolo andro ny andro ankalazana ny nahaterahan' i Kristy. Ny Rain' ny Fiangonana dia tsy nanohitra ny fisafidianana an' io daty io satria manamafy ny fahatongavan' ny Mesia izay nambara fa kintana miposaka (Lio. 1.78) sady masoandron' ny fahamarinana araka ny voalazan' ny mpaminany Malakia (Mal. 3.20). I Kristy no ilay "tena masoandro" sy "masoandro vaovao" izay mamirapiratra eto amin' izao tontolo izao.
Ny fizaran-taon’ ny Noely na Krismasy dia manaraka ny Advento (na Fiaviana). Ireo andro roa ambin’ ny folon’ ny Noely tany aloha dia manomboka amin’ ny harivan’ ny 24 Desambra miaraka amin’ ny Sasakalin’ ny Noely (fiaretan-torin’ ny Noely) ary mitohy hatramin’ ny fetin’ ny Epifania. Ny fari-potoan’ ny Noely dia mitohy hatramin’ ny fetin’ ny batisan’ i Kristy, izay ankalazaina amin’ ny endrika ahalalana azy amin’ izao fotoana izao amin' ny fombam-pivavahana romana amin’ ny Alahady aorian’ ny 6 Janoary na ny Alatsinainy manaraka raha an’ ny Epifania io Alahady io.
Talohan’ ny taona 1970 dia nankalazaina amin’ ny 13 Janoary io fety io, afa-tsy hoe io 13 Janoary io Alahadin’ ny Ankohonana Masina izay ankalazaina asolo azy. Hatramin’ ny nanafoanana ny Valo andron’ ny Epifania (Ôktavan’ ny Epifania) tamin’ ny fanavaozana natao tamin’ ny 1960 dia andron’ ny Valo andron’ ny Epifania ny 13 Janoary, izay manondro ny daty famaranana ny fizaran-taona.
Araka ny fomba tranainy dia ny 2 Febroary no fifaranan’ ny Noely, na fetin’ ny Fanehoana ny Tompo (tany amin’ ny tempoly), izay antsoina hoe koa fetin’ ny Fanazavana. Io fety io dia itantarana ireo 40 andro fialan-tsasatr’ i Maria talohan’ ny hidiovany sy hitondrany ny zanany haseho any amin’ ny tempolin’ i Jerosalema. Tamin’ ny Andro Antenantenany, ny andro alohan’ ny Fanazavana (1 Febroary) dia nanamarika ny andro anesorana ny haingoan’ ny Noely, isan’ izany ny hazon’ ny Noely sy ny fampisehonana ny tantaran’ ny Fahaterahan’ ny Mpamonjy. Ny fomba fanao izay manapitra ny Noely amin’ ny fetin’ ny Fanazavana dia nihamaty, afa-tsy ao amin’ ny faritra miteny espaniôla eto amin’ izao tontolo izao izay mbola manome lanja ny Fetin’ ny Fanazavana (espaniôla: Fiesta de la Candelaria) sady fiafarana tsy ofisialin’ ny fizaran-taon’ ny Noely.
Ny hazon' ny Noely na hazon' ny Krismasy dia hazo na sary hazo nohingoina sy noravahana ao am-piangonana na any an-tokanrtano na eny amoron-dalana na eny an-jaridaina, mba hoenti-mankalaza ny Noely. Ny hazon' ny Noely, ankehitriny, dia ravahana amin' ny alalan' ny bolan' ny Noely sy girlandy tsotra, na miravaka jiro na labozia ary zavatra madinika isan-karazany fanaingoana, ahitana kintana maro ka ny lehibe indrindra dia apetraka eny amin' ny tampon' ny hazon' ny Noely. Ny zavamaniry atao hazon' ny Noely dia amidy efa avy notapahina na avarora anaty tavy, ka ity farany ity dia azo avela ho velona mba hampiasaina amin' ny Noely manaraka. Misy koa ny manao hazon' ny Noely eny ivelan' ny trano: eny an-tokontany na ao an-jaridaina. Ny fampiasana hazon' ny Noely namboarina (vita amin' ny plastika) dia fomba iray ialana amin' ny fanapatahana hazo, nefa ny fampiasana izany dia tsy azo lazaina ho fomba anajana kokoa ny tontolo iainanana raha mitaha amin' ny hazon' ny Noely voajanahary, noho ny fandotoana mety ateraky ny fanariana azy rehefa tsy azo ampiasaina intsony. Toy ny amin' ny Noely na Krismasy ihany dia tsy misy firesahana momba ny hazon' ny Noely ny ao amin' ny Baiboly. Izany anefa tsy mahasakana ny mpiaro io fomba io hanamarina azy amin' ny fampahatsiahivana andalana sasany ao amin' ny Baiboly.
Tamin' ny taonjato fgaha-17, tao Angletera, dia tsy nankalaza Noely ny Poritàna satria heveriny fa fetin' ny fahamamoana io fety io, sady zavatra noforonin' ny Katôlika, famantarana ety ivelany ny fanjakazakan' ny papa. na voro-damban' ny Bibidia.
Tsy mankalaza Noely ny Vavolombelon' i Jehovah satria, amin' izy ireo, tsy nandidian' i Jesoa ny fankalazana ny fahaterahany sady tsy fomba jiosy na kristiana ny fankalazana ny fitsingerenan' ny andro nahaterahana fa fomban' ny mpanompo sampy, ary ny Krismasy rahateo dia avy amin' ny fetin' ny mpanompo sampy  .
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Noely&oldid=1010328"
Voaova farany tamin'ny 26 Martsa 2021 amin'ny 20:42 ity pejy ity.